I'm Good Explained — Trip LEE - OFISIALY SITE
Dia hoy izy: Tsy meloka aho na dia mbola tsy nisy ny fitsarana daty /
Izany no toerana mpino maro mahita ny tenantsika. Fantatsika fa ny fanaintainana, fitsapana, ary ny fahafatesana mihitsy aza angamba no akaiky. Ny tahotra hibitsibitsika eo amin'ny sofina ka lazao aminay fa fitsarana io dia ny fahataperan'izao tontolo izao- fa izany eo ho antsika. Fa tsy ny zavatra efa nilaza ny Tompo antsika. Nampanantena ny Tompo antsika fa isika dia azo ambara ho tsy meloka eo anatrehany noho ny amin'i Kristy (Romanina 4:5). Ary noho izany isika dia tsy ho very (John 3:16). Ny fahafatesana dia tsy ny farany ho an'ny kristianina; izany no fiandohan'ny vaovao, be voninahitra bebe kokoa ny zava-misy.
Nanandrana aho ary nahita Azy aho, na dia fotsiny santatry /
Satria maty i Jesosy ka nitondra ahy ho an'Andriamanitra (1 Peter 3:18), Aho nanandrana ka nahita fa tsara. Fa ny zava-tsoa izay efa nanandrana izao ihany santatry. Indray andro izany dia hiaraka Tompoko, ary miaina ny hatsaram-panahiny feno.
Tsy fantatro izay mahatsiaro, Tsy fantatro izy ireo mieritreritra /
Rahalahy ny mety resy ny fanahiko toy ny Mario rehefa blinking /
Ao amin'io tsipika, Aho manana kely mahafinaritra miaraka amin'ny Mario Reference. Fa izaho dia tsy tsara ny milaza fa aho mety resy. I azo naratra, Afaka ho kivy, Afaka ho faty mihitsy aza. Fa ny fanahiko tsy mety ho maty na rava, satria aho tsy manana ahiahy ao amin'i Jesosy. Rehefa mahazo izany Super Mario blinking manokana kintana, na inona na inona fahavalony izy nihazakazaka ho any, tsy afaka handratra Azy. Toy izany koa no azo lazaina ny voavotra fanahy. Afaka rip ny tenako shreds, Fa ny fanahiko dia hijanona rava. Ary Andriamanitra efa nanamboatra tanàna ho antsika (Hebreo 11:16).
Izy ireo mahita ahy feno fifaliana, tahaka Tsy zavatra hisotro /
Cup Feno rano velona Rahalahy, I sip izany ary misaotra Azy, eny tompoko/
Olona afaka mahita ahy niady ho fifaliana eo amin'ny fitsarana sy ho very hevitra. "Ahoana no mitsiky ao amin'izao andro izao?” Fa tsy adala aho na nisotro, Tsy manana ahiahy aho. Aho sipped avy amin'ny fantsakana ny fiainana mandrakizay, ary ny fanahiko dia afa-po (John 4:13-14).
Mba tsy hahazo ny Grammy, na hahazo iray hafa kintana /
Fa aho hahazo valisoa avy amin'ny Tompoko, dia tsy mahasoa /
Mba tsy drafitra indray, Mba tsy hivarotra ny Milli /
Fa izaho no novidina ny Mpanjakako, Izy mandrakizay amiko /
Nanoratra ampahany ity, satria, eto amin'izao tontolo izao ny mason'ny ny haavon'ny fahombiazana ho an'ny mpanakanto dia mivarotra ny bunch ny rakitsoratra sy ny fahazoana ny bunch ny fankasitrahana. Fa na dia tsy mahazo mari-pankasitrahana iray hafa na ny tany amin'ny tabilao hafa, Mety ny amiko. Mba tsy mahazo valisoa avy amin'izao tontolo izao, fa hahazo valisoa aho avy Jesosy. Ny rakitsoratra dia mety tsy ho novidina avy na iza na iza, fa efa efa novidina sy nanavotany Jesosy.
Ka izay miresaka bout? Tsy misy tsy afaka mandondòna ahy /
Yessir aho mahatsapa fanaintainana, fa Jesosy nahazo ahy izao /
Fanindroany, Tsy te hieritreritra aho ry namana ny Kristianina hoe tsy hiatrika fitsarana, na na dia tsy mahatsapa ny lanjan'ny ireo fitsapana. Matetika isika tojo fijaliana mafy, fa Jesosy no antsika.
Izany no mahatonga aho manao feo, izany no mahatonga mihazakazaka mafy aho /
Izany no mahatonga ahy mandeha rajako, nandrora azy ireo gidro trano fisotroana /
Ny fahamarinana rehetra voalaza etsy ambony aho mandrisika ahy. Izany no mitory vaovao tsara sy maty Albums. Izany no mahatonga ahy te handrora fisotroana izay azony ny sain'ny olona. Te-milaza azy ireo ho any amin'ny loharanon'ny zavatra tsara rehetra.
Mpiara-miombon'antoka fantatrao tsara aho ny handeha /
Tsindry dia miteraka diamondra sy afo manatsara ny volamena /
Tsy misy na inona na inona eto amin'ity tany ity izany fahafaham-po ny fanahiko /
Velona aho noho ny rahampitso, amin'izao fotoana izao dia tsy voafehy, fa sho, Mety ny amiko/
Raiso ny vola rehetra, Mety ny amiko/
Ireto avy ny fanaintainana, Mety ny amiko/
Yeah afaka hamono ahy, Mety ny amiko/
Ny fahafatesana no ahazoako tombony, Mety ny amiko/
Aho dia tsy nilaza fa tsy mahatsapa na fanaintainana /
Fotsiny aho hoe tsy afaka nitondra anay nivoaka ny lalao, homie antony tsara isika /
Ireo tononkira dia tena tsara tarehy fanazavana. Ao amin'ny teny manodidina ny izao fihirana izao "tsara” tsy hoe tonga lafatra aho na marina eo an-tanako manokana. Ara-Baiboly dia fantatsika fa ny tsy marina ny misy antsika (Romanina 3:11-12). "Mety ny amiko” no fomba iray hafa ny hoe:, "Mangatsiaka aho” na "maninona ny zava-drehetra.” Satria izahay ao amin'i Kristy, azonao atao ny zavatra rehetra avy amintsika, fa tsara izahay, satria isika dia mifototra ao amin'i Kristy.
Fantatro fa mijaly I'ma, izay Ho ahy ihany henjana /
Ny fahafatesana fotsiny varavarana ny hitondra ahy ho any ny mahatoky tia /
Andinin-tsoratra masina toy ny Asan'ny Apostoly 14:22 ary 2 Timothy 3:12 mampahatsiahy ahy fa toy ny Kristianina no hijaly. Ary ny andinin-tsoratra masina tahaka an'i James 1:4-8 ary Romanina 8:28 mampahatsiahy ahy fa mampiasa ny fijaliana mba manao ahy bebe kokoa tahaka an'i Kristy. Ireo fitsapana dia mety mihitsy aza ny aiko, fa ny mpino tsy hatahotra ny fahafatesana. Jesosy dia naka ny fanindronan'ny amin'ny fahafatesana, ary ny tsara kokoa ho antsika ny ho niaraka tamin'i Jesosy noho ny ho eto.
Ny Tia ny fanahiko ny amiko, dia afaka hanozongozona ny rahalahy /
Fa na oviana na oviana ianao mandondòna ahy, na mandray ahy eo ambany, hitondra ny kotrokorana /
Aoka ny rivo-doza avy tsain'ny antsika sy hanimba antsika /
Izy ireo tsy afaka maka Tompontsika amintsika Rahalahy antsika dia nahazo ny didim-pitsarana /
tsy meloka, Izy no miaraka amintsika ary mitoetra ankehitriny /
Tsy mamela ahy mihitsy aza izy manome ahy sehatra anatrehan'ny /
Ireo enina farany fisotroana rehetra anchoring iray mijoro ho vavolombelona ny fahamarinana, ny Tompo no miaraka amiko. Ary na inona na inona no mitranga, Dia mbola ho amiko. Tsy misy na inona na inona afaka hampisaraka ahy avy ny fitiavan 'Andriamanitra ao amin'i Kristy! (Romanina 8:38-39)
Ny zava-dehibe indrindra momba Ahy dia ny hoe aho tafaray amin'i Jesosy. Izay tsy mety ho misaraka amiko. Na inona na inona tonga ny lalana, Nampianatra ahy ny milaza, "Ny soa ny fanahiko.”
M.J.S. • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:41 aho • navalin'i
mafy, mahery rahalahy mozika. Nijery ny lahatsary ho an'ny “Mety ny amiko,” dia niala aho te hahalala ny amin'ny antony nifidiananao ny toe-javatra ny silamo tovovavy rehefa fanararaotana ara-batana noho ny mamaky ny Baiboly?
Silamo tsy mino izay rehetra 'Andriamanitra ny mpaminany sy ny Soratra Masina dia nentin'ny olona tany amin'ny firenena. Misy hevi-diso predominate fa ny Silamo no tsy mino an'i Jesosy. Ny maha samy hafa manan-danja ao amin'ny finoana silamo dia ny hoe mihevitra an'i Jesosy ho ny Mpaminany, ary tsy misy ao amin'ny finoana silamo ny Mpaminany dia heverina ho manan-danja kokoa noho ny hafa.
Ny tanjona fa ity lahatsoratra ity dia tsy mba miady hevitra ny fivavahana, fa ny hanesorana tsy fahazoan-kevitra mba hamaranana ny fiparitahan'ny vaovao tsy marina. Tsy fantatro izay midika anao manokana natao mba hampitana ny sehatra(izany no mahatonga aho manontany), fa manokana dia mamadika ny finoana silamo rafitra momba Soratra Masina.
Woleogundele • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:41 aho • navalin'i
Loyd • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:41 aho • navalin'i
Afaka manao izany ianao, azafady fa tsy mahalala Ahy. Aho dia tena te hahafantatra ny heviny eo amin'ny dingana ny teny safidy. Indrindra fa ny anjara izay Rap fa “Efa nisara-fianakaviana sasany, Aho fantatra ny mahatonga ny vakin'ilay sambo.” Manana ny maka ny momba io andininy io, fa tiako ho fantatra tsara izay holazaina. Azoko tsara raha tsy manana ny fotoana hanaovana izany ary aza dininy izany. Ataovy ny olona mahatratra Trip. Ve ya tháng! TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Leslie • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:42 aho • navalin'i
Ny fotoana voalohany fandefasana :) Faly aho no namoaka ity hira miaraka amin'ny soratra masina sy ny hevitra ao ambadiky ny dingana tononkira. Ny 9-taona zanany ary samy tia ny mozika, ary mandray rahampitso aho ho any mandany fotoana tsara ny sasany aminy alohan'ny Nankao anaty sambo izahay tamin'ny faran'ny herinandro ny Paska. Tsy andriko ny hipetraka ilany-by-lafiny niaraka taminy ho any amin'ny alalan'ny tononkira ireo ary jereo ny Soratra Masina amin'ny tsirairay. Ho faly! Misaotra anao Trip, fitiavana be avy any Orlando, FL!!
Wayland Wilson • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:42 aho • navalin'i
Faly ny eto ny any DC faritra. I indraindray mihantona ao Chinatown manantena ny mankamin'ny anao indraindray. Peace.
Brandon Caron • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
Faly ny mahafantatra fa manana bilaogy. Dia tsy maintsy manomboka mijery ao ombieny ombieny. Tsy fantatro.
Aaron Fillmore • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
Tiako ny feelin ny Fanahy mihetsiketsika ao anaty fanaovana fanatanjahan-tena mihaino ity…olona manontany izay mihaino ihany koa aho-Lazaiko en #imgood
migisha Boyd • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
fijaliana akwongele! _luganda for Andriamanitra anie hitahy anareo”
Shola Rock • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
Ataovy rapping ho an'i Kristy. Tiako daholo ny Albums. Dia an'i Kristy rehetra mifototra sy ny Baiboly. Ny feony ihany koa mangatsiatsiaka sy ny mitempo ianao dia mampiasa awesome; Andriamanitra anie hitahy anao Bro!!!
Knnelomojki • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:43 aho • navalin'i
tsara iray GNU
Henock Teshome • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:44 aho • navalin'i
Tsara zavatra ary Misaotra noho ny fanazavana.
Tina • Aogositra 21, 2013 amin'ny 11:18 aho • navalin'i
Ny zanako lahy (9) ary Luv ity hira ity! Toy izany mahatahotra sy mahery heviny ao ambadika :)